Salesforce CEO manambara blockchain drafitra ho an'ny vokatra - Blockchain News
Aprily 9, 2018 Admin
Salesforce CEO manambara blockchain drafitra ho an'ny vokatra
Salesforce dia miasa amin'ny vokatra blockchain mifototra amin'ny teknolojia, ny rahona computing ny Filoha Tale Jeneralin'ny orinasa nanambara.
Marc Benioff, izay nanorina ny orinasa 1999, nanao hoe: “Aho, efa nieritreritra be momba izay Salesforce ny tetika manodidina blockchain, ary inona no Salesforce ny paikady manodidina cryptocurrencies sy ny fomba rehetra mifandray amin'ireo zavatra ireo,” hoy izy.
Na dia tsy manome tsipiriany momba ny atsy ho atsy vokatra, Benioff nilaza fa manantena ny “manana blockchain sy ny vahaolana ho an'ny Salesforce cryptocurrency sy ho an'ny rehetra ny mpanjifa” alohan'ny Dreamforce – ny fihaonambe dia hampiantrano ny orinasa any San Francisco tamin'ny Sept. 25.
Salesforce no tsara indrindra-fantatra amin'ny rahona computing rindrambaiko ho an'ny mpanjifa fifandraisana fitantanana. Ny orinasa natao $10.5 lavitrisa amin'ny vola miditra ao amin'ny taona mifarana Jan. 31.
Miaraha Salesforce Filohan'ny sy Marc Benioff CEO sy ny mpiara-manorina Parker Harris ho takariva amorom-patana Chat tamin'ny Alarobia tolakandro. Ento ny fanontaniana sy mahazo valiny mivantana avy amin'ny mpanorina ny salesforce.com
Mihoatra ny 1200 gazety mpaninjara any Aostralia dia manolotra fanompoana toy ny miantsena Bitcoin Martsa 1
Avy anio Aostralia ...
Mpanao lalàna ao amin'ny U.S ...
Previous Post:Meksika fampandrosoana ny blockchain rafitra mifototra mpanolo-tsaina
Next Post:Alemaina ny No. 2 fifanakalozana tahiry drafitra ho an'ny fampidirana ny Crypto App Trading
Mey 28, 2018 amin'ny 1:52 PM